अराजक शब्दहरु: 11/19/18
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 10:42:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 10:09:00 PM No comments:
अब पुरानो चरम नियन्त्रणमुखी कम्युनिस्ट ढाँचाले हुँदै हुँदैन ।
परम्परागत सोपान क्रममा आधारित जुन नोकरशाही ढाँचा हो, त्यसलाई बदलेर कार्यसम्पादनमुखी, परिणाममुखी नयाँ कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा कुनै पनि प्रयत्न गरिएन ।
समाजको मनोविज्ञान नबदलिईकन विकास–समृद्धि हुँदैन । परम्परागत जुन संस्कृति र संस्कार हुन्छ, त्यसलाई पनि युगसापेक्ष ढंगले हामीले बदल्न सक्नुपर्छ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 10:02:00 PM No comments:
राज्य चलाउने प्रमुख स्रोत कर नै हो । राज्यको खर्च र निजी खर्चबीच रेखाङ्कन गर्न सक्दा सुशासनको जग बस्छ । राज्यस्रोतको दोहन घट्छ ।
करले बाध्य भन्ने शब्दलाई जनाउँछ । यो अङ्ग्रेजी ट्याक्सबाट आएको हो र सो ट्याक्स पनि ल्याटिनको ट्याक्सोबाट आएको हो । त्यसले बाध्यात्मक रूपमा तिरिने वित्तीय दायित्व नै बुझाउँछ । व्यक्ति वा संस्थाबाट आयको केही अंश राज्य सञ्चालनका लागि वहन गरिने दायित्व कर हो । कर कानुनी आधारमा तिरिन्छ र नतिर्नु गैरकानुनी हो । तर, करलाई स्वेच्छिक जनसहभागिता बनाउँदै करको स्रोत र सङ्कलनदेखि खर्च प्रणालीसम्म पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।
आयकर ऐन २०५८ ले आयकरलाई असाध्य वैज्ञानिक बनाएको छ । आयसित सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसाय, रोजगारी र पारिश्रमिकबाट हुने आय करदाता स्वयम्ले घोषणा गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । यसले करसित असुली शब्दको प्रयोग गर्नु पनि जरुरी छैन । कर सङ्कलनले नै काफी अर्थ दिन्छ ।
आयकरसँगै भन्सार पनि कानुनी रूपमा पारदर्शी छ तर कार्यान्वयन फितलो ।
कर दिवस मनाइरहँदा २०५४ सालवरपर सम्झनुपर्ने हुन्छ । राज्यको कर प्रणाली वैज्ञानिक थिएन । बिक्री कर, होटल कर र मनोरञ्जन कर प्रयोगमा थिए । त्यसमा वैज्ञानिक आधार कम थिए । आयकर पनि अधिकारीले बयानका आधारमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी कर सङ्कलन गरिन्थ्यो । कर छल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ र त्यतिखेर त झनै व्यापक थियो । भ्याटको कार्यान्वयनपछि अलि सुधार आयो तर अझै यात्रा पूरा भएको छैन ।
चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार राज्यकै ढुुकुटीले बनाए । जनश्रमदान पनि निःशुल्क र अति न्यून ज्यालामा लगाए तर तयार भएपछि फेरि राज्यलाई नै बेचेर भाइहरूमा पैसा बाँडे । राणा, शाहका वरपर र उनका बिर्ताद्वारा जमिनमा स्वामित्व भएकाहरूकै लामो समयसम्म शासन र अर्थतन्त्रमा स्वामित्व हुँदै आएको छ । जनताको करबाट परदर्शी रूपमा अर्को सिंहदरबार बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा सीमितको रजाइले नयाँ वर्ग सिर्जनाजस्तै गरेको छ । केही अपवाद हुन सक्ला तर अधिकांश प्रवृत्ति यही हो । भन्सार र राजस्वका सामान्य कर्मचारीहरू रवाफले सीमा नाघेको समाजले देखिरहेको छ । सुधारको डण्डा एकातिर चलाएरमात्र हुँदैन ।
‘कर, डर र भर’ ले काम गर्नुपर्छ । कर तिर्नु दायित्व हो भन्ने कुराका लागि मैले तिरेको कर चाणक्यको मर्मअनुरूपजस्तै खर्च हुन सकोस् । राजस्वमारा कुनै पनि व्यक्तिले छाती फुलाएर हिँड्न नसकोस् अनि सरकारी निवासमा राजनीतिक दलका भोजभतेर नहून् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्नुभएझैँ अहिले पनि कर तिर्नमा भन्दा छल्नका लागि बढी सचेतता देखिन्छ । करको दायरामा एकपटक पसेको मानिस कालको मुखमा पुगेको महसुस नगरोस् । अहिले कतिपय प्रवृत्ति त्यस्तै छ । करभन्दा पर बसेको शान वृहत् छ भने करभित्र बसेको मानिसको हण्डर भनिसाध्य छैन ।
सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मका कर्मचारीले वर्षौं भइसक्यो एक प्रतिशत कर बुझाएको । अर्बौ रुपियाँ ढुकुटीमा बसेको छ तर त्यसको उपयोग ऐन, नियम, कार्यविधिभन्दा भन्दै वर्षाौँ बितिसकेको छ ।
बेथितिका कुरा गरिरहँदा कर प्रशासनमा सुधार फिटिक्कै भएको छैन भन्ने पनि होइन । कर प्रशासनमा सुधारका प्रक्रिया अगाडि पनि बढिरहेका छन् । कानुन, काइदा र प्रद्धति पनि लागू हुँदै छन् तर सूचना प्रविधिको जुन युगमा दुनियाँ पुगेको छ, त्यसअनुरूपको सुधार अपेक्षित छ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 9:46:00 PM No comments:
Labels: राजस्व प्रशासन
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 9:26:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 9:15:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 7:52:00 PM No comments:
गरिबी, गुलामी र गीताबाट प्रेरित थिए गान्धी -सञ्जय पन्थी
गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनले नै सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतलाई ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता दिलायो। तर गान्धीको अहिंसाको प्रयोग कुनै समय विश्वका लागि मजाकका विषय बनेको थियो। ब्रिटिश महाराज जर्ज पञ्चमले समेत अहिंसात्मक क्रान्ति भएको इतिहास नै छैन् भनेका थिए। तर पछि उनै महाराजले बकिंघम प्यालेसमा उनै गान्धीसँग वार्ता गर्नु परेको थियो।
गान्धीले भनेका छन्– जोसँग नैतिक बल नै छैन्, उसले सत्यलाई आत्मसात् नै गर्न सक्दैन।
ज्ञान, ध्यान, साधना (कर्म), विवेकसँगै संयमता र उच्च बौद्धिक चेतनाले मात्र व्यक्तिमा नैतिक बल जागृत गराउँछ। नैतिक बल आर्जनका लागि मानिसमा सरलता, लगनशील, श्रम, मानवता र अहिंसात्मक भावना हुनुपर्छ।
गान्धीले एकसरो धोती लगाउने प्रेरणाबाट लिएको रोचक प्रसंग छ। सन् १९२२ मा गान्धी एउटा कार्यक्रममा भाग लिन तमिलनाडुको मदुराइ पुग्दा त्यहाँका गरिब किसान महिलाहरु आधासरो कपडा मात्र लगाएर पानी बोक्दै गरेको दृश्य देखे। भोलिपल्ट कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको हैसियतमा भाग लिँदा एउटा धोतीको पहिरनमा मात्र उपस्थित भएका थिए। त्यस क्रममा उनले भनेका थिए– देश गरिबीबाट आक्रान्त छ भने मैले कसरी टाइसुट लगाउन सक्छु? त्यसपछि गान्धीले शरीरमा झकिझकाउ पहिरन लगाएनन्। बरु आफूले लगाउने धोती पनि आफैं चर्खा चलाएर बुनेको खादीबाट लगाएर जीवन निर्वाह गरे।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 7:41:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 3:31:00 PM No comments: